Bakhomba ibatha kuKhomishini kaZondo - Bayede News
Bakhomba ibatha kuKhomishini kaZondo
Umbango ususendaweni yesibili kweye-EPL
Okusolwa komunye oqokiwe kungahle kususe amehlo kulokho okumqoka okuwuphenyo ngokugwamanda umbuso
NGESIKHATHI izwe lithokozela inqubekela phambili odabeni oluthinta ukugwamandwa kombuso sekuvele ichashaza nelithinta omunye wabazohamba phambili ophenyweni oluholwa nguMehluleli uRaymond Zondo.
NjengoSihlalo weKhomishini ezokwaziwa ngokuthi yiState Capture Commission, uMehluleli uZondo umemezele izingqwayingqwayi ezihlanganisa uDkt uKhotso De Wee, uMmeli waseMajajini uVincent Maleka, uMnu uTerence Nombembe, uMmeli waseMajajini uNks uLeah Gcabashe, omunye uMmeli waseMajajini uMnu uPaul Pretorious kanye noNks uThandi Norman.
Kuthe kungakapheli namahora angamashumi amabili nane kumenyezelwe la magama kwase kuvuka ukukhuluma ngegama likaNombembe nowayenguMgcinimabhuku Jikelele wakuleli nophinde abe yisikhulu esiphenzulu seSouth African Institute of Chartered Accountants (SAICA).
UMehluleli uZondo uthe ngesikhathi ethula uNombembe: “Ozoba yinhloko yophenyo yekhomishini uMnu uNombembe ozohola ithimba labaphenyi abanobuchwepheshe obuhlukene ukuze bakwazi ukumelana nohlobo lophenyo oludingekayo.”
Isikhalo ngoNombembe siqhamuke eqenjini eliphikisayo i-Economic Freedom Fighters (EFF) esithangamini sabezindaba izolo lapho lisole uNombembe ngokungabi msulwa njengoba amukela isamba semali engumnikelo ngonyaka owedlule enkampanini esoleka ezenzweni zokugwamanda umbuso.
Lo mnikelo wavela kwaTrillian Capital nokuyinkampani enuka phu inkohlakalo ethinta umndeni wakwaGupta kanye no-Eskom. Umnikelo wabe uyizigidi ezi-R1.2, unikelwa ku-SAICA.
Umholi we-EFF uMnu uJulius Malema uthe okwabashaqisa wukuthi nxa bembhalela uNombembe bembuza ngalokhu, akaphendulanga kepha wathi “kumele bahlangane” nathi. Lo mholi othe lokhu bakuhumusha ngokuthi wabe enezinhloso zokubavala umlomo njengeqembu.
Khona lapho uMalema uveze ukuthi kuyothanda kube yinkinga nxa uNombembe eqhubeka kulesi sikhundla aqokelwe kuso ngoba bona njengeqembu bambeke ohlwini lwabantu okuyomele ayophendula. Yize enganabanga kulokhu uMalema okusobala wukuthi kungenzeka kube khona abangafuna izimpendulo kuNombembe njengoba ezinye zezinkampani ezisolwayo ngezabacwaningimabhuku nokungahle kulindeleke ukuthi yena ngesigqoko seSAICA wathula wathini nxa kugilwa imikhuba.
Akagcinanga lapho uMalema ngoba khona lapho ube esehlasela isinqumo sikaMehluleli uZondo sokubeka ummeli waseMajajini uPretorius nathe ukubekwa kwakhe njengozoba ngaphezulu kwaboHlanga kuqhuba imfundisoze ethi aboHlanga kumele bahlale beholwa ngabe zizwe. Ukhale ngokuthi yini uMmeli waseMajajini uMaleka abe ngaphansi kukaPretorious oqokelwe ukuhola ithimba labaphenyi (ngasohlangothini lomthetho) kanti uyaziwa ngamangwevu asebenawo kulo msebenzi. Uke waba yibamba uMehluleli eNkantolo yaseWitwatersrand (Local Division). UPretorius uzolekelelwa uMaleka osebe wuqweqwe lo Mmeli iminyaka eli-16. Akugcini nje lapho kodwa uMaleka uke waba uMehluleli eNkantolo eNkulu okubalwa neyabaSebenzi.
UNobhala waleli thimba selilonke kuzoba uDe Wee oke waba nguMqondisi esikhungweni seMfundo ePhakeme, iFort Hare, wabuye waba yiNhloko ehhovisi lo Mnyango Wezobulungiswa Nokuthuthukiswa KoMthethosisekelo.
U-Advocate uLeah Thabisile Gcabashe uwuqweqwe loMmeli osebambe izikhundla emikhakheni eyahlukene. Kafushane nje ngaye unguSihlalo webhodi elibhekele ukubuyekezwa kwezinqumo kuSouth African Football Association (SAFA). Ngaphambi kwalokhu wayeyilungu le bhodi elibhekele izimvume zokushayela eMnyangweni Wezokuthutha KwaZulu-Natal. Wabamba njengoSihlalo webhodi leSentech. Wabuye waqokwa waba nguSihlalo wekomiti ebelicwaninga ukusebenza kweSASSA. Njengamanje uyiphini likaMengameli weSouth African Women Lawyers.
Usebenzele nezinye izinkampani zabacwaningi ezihlonishwayo eNingizimu Afrika. U-Advocate uNorman uke waba nguSihlalo weKhomishini eyayiphenya ngokushona kwababefesele ukuba amaphoyisa omgwaqo eMgungundlovu ngowezi-2013. Uke wahola ithimba lo fakazi kuKhomishana kaPillay ngowezi-2005 nekaGoldstone ngowe-1995. Useke wabamba njengoMehluleli izikhathi eziningi KwaZulu-Natal nase-Eastern Cape kusuka ngowezi-2002. Waba sethimbeni lokuqala elalihola ukhetho lukaHulumeni wokuqala wentando yabantu eNingizimu Afrika ngowe-1994. Alukaziwa usuku lweKhomishini ezoqala ngalo ukwenza umsebenzi.
UZondo ubuye wakhuluma ngekomidi lePhalamende elilalela izindaba eziphathelene nokugwamandwa kombuso wathi iKhomishini ayifuni ukuphinda osekwenziwe kwezinye izithangami ngoba ukuphenya kweKhomishini kuzobe kujule kakhulu. “Umphumela esiwudingayo uthi uma sekuphela uphenyo ukuthi izakhamuzi zaseNingizimu Afrika ziqonde ubunzulu bodaba lokugwamandwa kombuso ukuze siyizwe singazitholi esimweni esifana nesakuqala. Labo abenze ubugebengu mayelana nokugwamandwa kombuso kofanele kubhekwane nabo kusetshenziswa uhlelo lokuqondiswa ubugwegwe kwezobugebengu. Lokhu futhi kuyithemba leKhomishini.”
Anathi Mtaka Mar 9, 2018